ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ၊ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဘယ်ဆုနဲ့ မထိုက်တန်ကြောင်း လူသိရှင်ကြား စွပ်စွဲချက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် နေ့ တွင် အယ်လ်ဂျာဇီးရား နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနမှ ရိုဟင်ဂျာလူထုများ ဘ၀ပျက်နေကြသည့် ပုံများ၊ စခန်းအတွင်းနေထိုင်ရာ တွင်လည်း အကူအညီများ မရရှိ၍ စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ ဖြစ်နေပုံများ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ လှေဖြင့်ကူးပြေးရန် ကြိုးစားသော်လည်း အဆိုပါ နိုင်ငံရှိအာဏာပိုင်များက လက်မခံပဲ ထမင်းထုပ် တယောက် တထုပ်ပေး၍ ရေထဲသို့ ပြန်မောင်းထုတ်လိုက်သဖြင့် အော်ဟစ်ငိုကြွေးကာ လှေပေါ်ပြန် တက်သွားကြရသည့် ပုံများကို အချိန်အတော်ကြာ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။
တဆက်တည်းတွင် အယ်လ်ဂျာဇီးရား နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနက ရိုဟင်ဂျာပြသနာကို လေ့လာလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိ သော ကုလသမဂ္ဂမှအပါအ၀င် ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ ကို အင်တာဗျူး
လုပ်ပြီးတင်ပြသွားခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ (Human Rights Watch) မှ Brad Addam က အစိုးရအာဏာပိုင်များသည် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှစပြီး ဘက်တဘက် မှ ရပ်တည်ကာ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ရက်စက်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း တိတိကျကျ ပြောသွားခဲ့သည်။
လန်ဒန်မြို့၌ အခြေစိုက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူဟု အမည်ခံထားသူ မိုဟာမက်နူး (Mohamed Nour) ဆိုသူက နိုင်ငံကြီးများသည် ဤသို့သော ကျူးလွန်မှုကြီးများကို နုတ်ဆိတ်နေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းဝင်၍ စီးပွားရေး နှင့် အခြားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများ လုပ်ခြင်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများ အပေါ် ကိုင်တွယ်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောင်ဆန်းစုကြည် သဘောတူညီပြီးဟူ၍ ဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့ ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာ အရေး အပေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မျက်စိမှိတ်ထားလျှက်ရှိကြောင်း၊ အောင်ဆန်း စုကြည်သည် နိုဘယ်ဆုနှင့် မထိုက်တန်ကြောင်း နိုင်ငံတကာရှေ့တွင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်
မြန်မာစကားပုံ တခုရှိပါသည်။ အပျက် အပျက်နှင့် နှာခေါင်းသွေးထွက်တော့မည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာအရေး နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း ရှိလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာမက တိုင်းရင်းသားပေါင်း စုံ လူမျိုးစုများအားလုံး နှင့် တိုင်းပြည်ပါ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းပါတော့မည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြောင်းပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံကို
ကမ္ဘာကပိုပြီး သိလာသည်ဟူ၍ ၀င့်ကြွားနေကြသည့်အချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပင် စတင် လက်ညှိုး ထိုးခြင်းခံရကာ တမျိုးသားလုံးဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးခြုံးရမည့်
အခြေအနေသို့ ရောက်သွားမှာ စိုးရိမ်မိပါသည်။ ဤ အချိန် တွင် ပြဿနာ၏ အခြေအမြစ်ကို ခေါင်းအေးအေးထား၍ စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာရန် လိုအပ်လာပါသည်။ အနာသိ လျှင်
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှနေ၍ နိုင်ငံတကာက စတင်ထောက်ပြဝေဘန်လာမှုများကို အဆိုးမြင် အနေဖြင့်မကြည့်သင့်ကြောင်း
ဦးစွာတင်ပြလိုပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း ကြီး၊ ငယ်၊ လတ် များသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ကျူးလွန်ခဲ့သည့်ဆိုးဝါးပြင်းထန်သော ပြစ်မှုကြီးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျူးလွန်ခံခဲ့ရသော တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုကြီး ဘက်မှ ရပ်တည်ကာ စစ်အစိုးရအား တောက်လျှောက်ပင် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ဝေဘန်ခဲ့ ကြသည်ကို မမေ့သင့်ပါ။
နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးလား၊ လူထု လုံခြုံရေးလား။
ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ ဘီဘီစီ မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေးဆွေးနွေးခန်းတွင် ကျောက်ဖြူမှ ရှေ့နေကြီးတဦးလည်းဖြစ်၊ စစ်အစိုးရတည်ထောင်ထားသော လွှတ်တော်တွင်
အမတ်တဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးဘရှိန်က ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ ကို မပြင်သင့်ကြောင်းကန့်ကွက်ဆွေးနွေးရာ၌ ဥပဒေသက်သက် နှင့် ပြောလို့မရကြောင်း၊
နိုင်ငံ၏ ပကတိ အခြေအနေကို ကြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်နီးခြင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှိနိုင်ငံမှာ လူဦးရေသန်း ၆၀ မှ သန်း ၁၆၀ အထိ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသား ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်ထဲမှာ အကြုံးမ၀င်သူများရှိလျှင် ထိုသူများမှာ မိမိတို့ ဆီ ဘာကြောင့်ရောက်လာသလဲဟု မေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးမှာ အဓိကကျကြောင်း၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့သော ခေတ်မှီတိုးတက်သည့် နိုင်ငံကြီးမျိုးသည်ပင် လုံခြုံရေးကို အဓိက ထားရကြောင်း
ဖြင့် ဆွေးနွေးသွားခဲ့သည်။ ဤအင်တာနက် http://youtu.be/esS0jgYGaLk တွင် ပြန်လည်နားထောင်နိုင်ပါသည်။
စာရေးသူသည် ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ အပေါ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနှင့် ပြည်တွင်းဥပဒေ အခြေခံများအပေါ်မှသာ
ဇောင်းပေးဆွေးနွေးခဲ့သဖြင့် ဦးဘရှိန် တင်ပြခဲ့သည့် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး ရှုဒေါင့်မှ ဆွေးနွေးချက်ကို တုံ့ပြန်ရန် အချိန်မရခဲ့ပါ။ တကမ္ဘာလုံးက
စောင့်ဆိုင်းကြည့်ရှုလျှက်ရှိသော နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနကြီးတခုက ယမန်နေ့က ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို အတော်ပင်အချိန်ပေးကာ မီးမောင်းထိုးလာသည့်အချိန်၌
လူထုများအတွင်း မှန်ကန် သည့် အယူအဆများ ရှိလာနိုင်စေရေးအတွက် ဦးဘရှိန်၏ နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးအယူအဆကို တုန့်ပြန်ဆွေးနွေးရန် လိုအပ် လာပါသည်။ အတွေး
မှန်မှ အလုပ်မှန်မည်ဟု ယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး ဟူသည်မှာ နိုင်ငံတခုကို အခြားနိုင်ငံတခုက သို့မဟုတ် အများက
စစ်ပြုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတခု၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို အခြားနိုင်ငံတခုက သို
့မဟုတ် အများကထိပါးစော်ကားခြင်းဟူ၍ ယေဘုယျအားဖြင့်နားလည် ပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာသည် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်သည့်အဆင့် မရောက်သေးပါ။
နိုင်ငံ့လုံခြုံ ရေး ကို ထိပါးမှာစိုးရိမ်၍ ဟူသည်ကို အကြောင်းပြကာ ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေများ၊ ပြည်တွင်းဥပဒေများကို ချိုးဖေါက်ကျူးလွန်မှု မှန်သမျှကိုလည်း လက်မခံနိုင်ပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာရေးရာများကို ဆက်ဆန်လုပ်ဆောင်ရာတွင်
ပြဿနာများစွာ ကြုံတွေ့ ရပြီး ပြင်းထန်သောဝေဘန်ကန့်ကွက်မှုများ မကြာမကြာ ခံရသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုသည် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးကို အဓိကထားသည်မှန်သော်လည်း နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးကို အကြောင်းပြ၍ အစိုးရအနေဖြင့် မူဝါဒ ချ မှတ်ပြီး ပြည်တွင်း၌ မိမိနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်လာသော လူမျိုးခြားကိုဖြစ်စေ၊ မွတ်ဆလင်နှင့် အခြားသာသာဝင်များ ကို ဖြစ်စေ ဆန့်ကျင်ကာ နိုင်ငံတကာလူ့ အခွင့် အရေးဥပဒေ များနှင့် ပြည်တွင်း
ဥပဒေများကို ချိုးဖေါက်ကျူးလွန်သည် ဟူ၍ မကြားဘူးပါ။ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံကို ဖေါက်ခွဲပြီးအကြမ်းဘက်မှုကြီး ကို ကျူးလွန်ခဲ့သော မွတ် စလင် အစွန်းရောက် အယ်လ်ကိုင်းဒါးနှင့် အိုစမာဘင်လေဒင်အား နိုင်ငံတကာထွက်၍ ပြင်းထန် စွာ အရေးယူခဲ့သော် လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာ၌ ဖြစ်စေ၊ မွတ် ဆလင် ဘာသာ ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်သည်ကို မတွေ့ရပါ။ ဦးဘရှိန်သည်
နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးအယူအဆကို သက်သေထူနိုင်အောင် အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုအား ကိုးကားခြင်းမှာ အခြေအမြစ်မရှိပါ။
ရိုဟင်ဂျာလူထုများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြသနာအပေါ် (State Security) နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး အမြင်ကို ကိုင်ကာ အကြမ်းဖက်သည့် နည်းလမ်း မကျင့်သုံးသင့်ပါ။ (Human Security) လူထုလုံခြုံရေး အမြင်ဖြင့်သာ ဖြေရှင်းဘို့ လိုပါ မည်။ ယင်းအမြင်ဖြင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ရှေ့ရှုပြီး ငြိမ်းချမ်းသည့် နည်းလမ်းကို အဓိက ထားဆောင်ရွက်မှသာ အမှန် ဆုံးဖြစ်ပါမည်။ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးအမြင် ကို ကိုင်စွဲကာ အကြမ်းဖက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ သဖြင့် ယခုမူ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ
ပြည်သူတရပ်လုံးတွင် လူထု လုံခြုံရေး ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ အသွင် ဆောင်သွားပြီး တဘက်ကို တဘက် မုန်းတည်းမှု များ၊ မယုံကြည်မှုများ၊ ထိတ်လန့်မှုများ ခံစားနေ ကြရပြီ ဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းနည်း မမှန်ခဲ့သဖြင့် မကောင်းသည့်အကျိုးဆက်များပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဤနည်းကို ဆက် လက်ကျင့်သုံးလျှင် ဘာသာရေးပဋိပက္ခ အဖြစ်သို့ ရောက်သွားနိုင်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ သည်
လူမျိုးတမျိုးဖြစ်ပါလျှက် အသိ အမှတ်မပြုဘဲထားသည်၊ အသိအမှတ်ပြုပေးရမည်ဟူ၍ ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုနေခြင်း၊ ဖိအား ပေး နေခြင်း မဟုတ်ပါ။
ရိုဟင်ဂျာများ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံနေရသည်၊ အစိုးရကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကျူးလွန်နေသည် ဟုသာ ထောက်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် အကြမ်းဘက်သည့် နည်းလမ်းကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးခြင်းကြောင့် တဘက်နှင့်တဘက် အပြန်အလှန်သတ် ဖြတ်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီး အခြားတဘက်တွင်
စစ်အစိုးရ၏ဖန်တည်း ကျူးလွန်မှုများ ပိုမိုတိုးချဲ့ လုပ်ဆောင် လာ ပါက အခြေအနေနှစ်မျိုး ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
တမျိုးမှာ ငါတို့မွတ်ဆလင်တွေ ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်ခံနေရသည်ဟု လှုံ့ဆော်မှုများ ပေါ်လာ ပြီး တကမ္ဘာလုံးရှိ မွတ်ဆလင် များက ရိုဟင်ဂျာနောက်တွင် ရပ်တည်သွားနိုင်သည်။
ရိုဟင်ဂျာအရေးမှ မွတ်ဆလင်အရေး သို့ကူးပြောင်းသွား နိုင် သည်။
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများက ရိုဟင်ဂျာများဘက်မှ ရပ်တည်အားပေးမှုများ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်လာနိုင် သည်။ ဤ အခြေအနေသို့ရောက်သည့်အခါတွင်မှ တကယ်တန်း
နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး ထိခိုက်လာမည်။ လူထုလုံခြုံရေးမှာမူ တွေးရဲစရာ ပင် မရှိတော့။
အခြေအနေနောက်တမျိုးမှာ ရိုဟင်ဂျာများသည် လူမျိုးအဆင့်အတန်း မရထိုက်ပါဘဲလျှက်
လူမျိုးအဖြစ် အတင်းတွန်း တင်သဖြင့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က ပါဝင် ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ဤသို့ သော သတ်ပွဲကြီးများ ဖြစ်ပွားရ သည်ဟု ဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ Genocide ခေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်ရာရောက်သည်။
နိုင်ငံတကာ့အလယ်တွင် ဤသို့ စွပ်စွဲခံလိုက်ရလျှင်ပင် အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းလှပါသည်။ တကယ်ဆက်ကျူးလွန်လျှင်လည်း နိုင်ငံတကာက တကယ်တန်း အရေးယူမှာသေချာသည်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်သည့်အဆင့် အထိ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သော လူမျိုးများရှိသည့် နိုင်ငံဟု သဘောထားကာ နိုင်ငံခြားခရီသည်များကအစ ရှောင်သွားနိုင်သည်။ လူထု စီးပွားရေးဘ၀ တိုးတက်ရန်
မမြှော်မှန်းနိုင်တော့။ ဤသည်မှာ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအခြေခံမှ တင်ပြခြင်း လည်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရေးဟူသည်ကို ဤသို့စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ၊ ရခိုင် အဓိကရုဏ်းအပေါ် ဘယ်လို ချည်းကပ်အဖြေရှာမလဲ။
စာရေးသူသည် ယခုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာ၊ ရခိုင် အဓိကရုဏ်းအပေါ် သုံးသပ်ရာတွင် သမိုင်းကြောင်းအရ ရိုဟင်ဂျာ သည် လူမျိုးတမျိုးဟုတ်၊ မဟုတ် အခြေခံမှ မချည်းကပ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံး၌စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးကာ ဒီမိုကရေစီ စစ်မှန်စွာရရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့်၊ စုဝေးခွင့်များ ရမှ သာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖေါ်ထုတ် လေ့လာ အမြင်ခြင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးနိုင်ကြပြီး လူမျိုးတမျိုးဆိုသည် ကို မည်သို့ သော အခြေခံများဖြင့် သတ်မှတ်သင့် သည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကိုပါ လူထုအခြေခံဖြင့်
ထို့နောက်တွင် တိုင်းပြည်၏ အရေးကြီးလှသော ကိစ္စရပ်များ၌ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူ၍ ဆုံးဖြတ်ကြရမြဲ ဖြစ်သလို ရိုဟင်ဂျာအား လူမျိုးတမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်သင့် မသင့် ဟူသည်ကို ဆန္ဒခံယူပွဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရန် လိုကောင်း လိုပါမည်။ မျက်မှောက်အချိန်တွင်မူ အတည်ပြုရန် အခက်အခဲရှိသော သမိုင်းအချက်အလက်ဆိုသည်များကို တင်ပြလာလျှင် ပုဂံ ရာဇ၀င်ကို တုတ်ထမ်း၍ ငြင်းရသည် ဆိုသကဲ့သို့သူမှန်သည် ကိုယ်မှန်သည် အငြင်းပွားမှုများဖြင့် သာ
အဆုံးသတ် သွားနိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် အကျိုးမရှိနိုင်ပါ။
သို့ ဖြစ်၍ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နိုင်ငံရေး (တနည်းအားဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ကျင့်သုံးလေ့ရှိသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဟန်) အခြေခံမှ ချည်းကပ်ပါမည်။ လူမျိုး (Ethnic
Nationality) နှင့် နိုင်ငံသား (Citizen) တို့၏ ဆက်စပ်မှု နှင့် ကွားခြားမှု အား လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ သမိုင်း ကြောင်း နောက်ခံမှ စတင် တင်ပြ ပါမည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ အချိန်တွင် စတင်ကျင့်သုံးသော ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၁) ၌ သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှင့်
နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှစ်ရပ်လုံးကို ပြဌာန်းထားသည်။
သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံ သားဖြစ်ခြင်း
ပုဒ်မ (၁၁) (က) မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား တမျိုးမျိုး၏ မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူတိုင်းသည် လည်းကောင်း၊
ပုဒ်မ (၁၁) (ဃ) ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှ အထက် အခြားမဲ့သော ဆယ်နှစ်အတွင်း ရှစ်နှစ်အောက် မယုတ်သောကာလ အဖို့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ပါဝင်လတ္တံ့သော အာဏာပိုင်နက် အတွင်း၌ နေထိုင်ခဲ့ ဘူးပြီးဖြစ်လျှင် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံအတွင်းတွင် ထာဝစဉ်နေထိုင်ရန် ကြံရွယ်ခဲ့သည်ဖြစ်၍၊ ထို့အပြင် တရားဥပဒေဖြင့်သတ်မှတ်သော အချိန်အတွင်းတွင် ထိုသို့သတ်မှတ်သော နည်းလမ်းနှင့် အညီ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသား အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းကို ထုတ် ဖေါ်သူတိုင်းသည် လည်းကောင်း၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်ကို အခြေခံကာ သဘာဝ
အလျှောက် နိုင်ငံ သားဖြစ် ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေတွင် အောက်ပါအတိုင်းပြဌာန်းထားသည်။
ပုဒ်မ (၃)။ ။(၁) အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ အလို့ငှာ “မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား တမျိုးမျိုး” ဆိုသည် မှာ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ချင်း၊ မြန်မာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ သို့တည်းမဟုတ် ရှမ်းလူမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ၁၈၂၃
ခုနှစ် (မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၁၈၅ ခုနှစ်) မတိုင်မီ ကာလမှစ၍ ပြည်ထောင်စုတွင်ပါဝင်သော နယ်မြေတခုခု၌ မိမိတို့၏ပင်ရင်းတိုင်းပြည် အဖြစ်ဖြင့် အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့သော မျိုးနွယ်စုများကို လည်းကောင်း ဆိုလိုသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်ကို အခြေခံကာ နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု
မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ရွေးချယ်ရေး အက်ဥပဒေ တွင်အောက်ပါအတိုင်း ပြဌာန်းထား သည်။
ပုဒ်မ (၃)(ခ)။ ။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ အထက် အခြားမဲ့သော ကာလအတွင်း ဆယ်နှစ်အတွင်း ရှစ်နှစ်အောက် မယုတ်သော ကာလအဖို့ ပြည်ထောင်စု
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်နက်အတွင်း၌ နေထိုင်ခဲ့ဘူးသူ ဖြစ်ခြင်း။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ခေါင်းဆောင်သည့် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပုဒ်မ ၁၄၆ အရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားပြုခြင်း၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍
ဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်စေရ မည်ဟု ပြဌာန်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြဌာန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် အဆင့်မှ လျှောကျ သွားပြီး အာဏာပိုင်တို့အလိုကျ ဥပဒေပြဌာန်းကျင့်သုံးသည့် အဆင့်သို့ ရောက်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ကာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်မှစ၍ တောက်လျှောက် ကျင့်သုံးလာခဲ့သော ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ရွေးချယ်ရေး အက်ဥပဒေ ကိုလည်းကောင်း ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ဥပဒေ နှစ်ခုကို ဖျက်ပြီး တခုတည်း ပေါင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးဆက်အဖြစ်တွေ့ ရသည်မှာ သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံ သားဖြစ်ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အနှစ်သာရအရ ပြောင်းလဲ မသွားသော်လည်း ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ တွင် အောက်ပါ အားနည်းချက်ကြီးများကို တွေ့ရသည်။
(၁) မူလ ဥပဒေဟောင်းနှစ်ခုတွင် ပြဌာန်းထားသော တရားစီရင်ရေး၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး နိုင်ငံသား ကိစ္စများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အစိုးရ၀န်ကြီးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဗဟိုအဖွဲ့တွင်သာ အဆုံးသတ်စေ သည်။
(၂) မူလ ဥပဒေဟောင်းတွင် နိုင်ငံခြားသားတဦးဦးအား နိုင်ငံသားပြုမှု လက်မှတ်ကို လျှောက်ခွင့်ပေးထားပြီး သတ်မှတ် ချက် တရပ်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား
တမျိုးမျိုးကို ပြောဆိုတတ်ရမည်ဟု ပါရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသားဥပဒေ တွင်မူ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့မတိုင်မီ နိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိနေထိုင်သူနှင့် ၄င်းတို့မှ မွေးဖွားသည့် သားသမီးများကိုသာ လျှောက်ခွင့်ပေးသည်။
(၃) ဥပဒေသဘောအရ ရှုတ်ထွေးခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်း။
ဖျက်သိမ်းခဲ့သည့် ဥပဒေဟောင်းနှစ်ခုမှာကဲ့သို့ မဟုတ်တော့ဘဲ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသားဥပဒေသည် ရှုတ်ထွေးပြီး သာမန်လူထုများ မျက်စိလည်အောင်ပြဌာန်းထားသည်။ ဤအချက်မှာ ဥပဒေကို လက်တွေ့ဖေါ်ဆောင်သော အခါ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင် များ၏ လက်တွင်းသို့ ကျရောက်သွားစေသည်။၎င်းတို့နှင့် အလွမ်းသင့်လျှင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ကို
အလွယ်တကူထုတ်ပေး လိုက်သည်။ အလွမ်းမသင့်လျှင် ဟိုစာရွက်တောင်း၊ သည်
ထောက်ခံစာထပ်တောင်းနှင့် နှစ်ပေါင်းကြာအောင် အချိန်ဆွဲ ထားလိုက်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်အတွင်း လာဘ်ပေး လာဘ် ယူ သည် ကြီးကြီးမားမား တည်ရှိလာပြီး နိုင်ငံအတွင်း တရားဝင် မရောက်ရှိသင့်သူပေါင်း မြောက်များစွာသည် လာဘ်ငွေများအပေါ်တံတားခင်းကာ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွတ်လပ်သော အာရှ အသံတွင် ဆွေးနွေးထားသည့် အစီအစဉ်ကို ဤ အင်တာနက် http://youtu.be/fhgWJPFfc70 တွင် ပြန်လည်နားဆင် နိုင်ပါသည်။
လွတ်လပ်ရေးရစကရှိထားပြီးဖြစ်သော ရှင်းလင်းသည့် ဥပဒေနှစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းကာ ရှုပ်ထွေးပြီး မပြည့်စုံသော ဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌါန်းခဲ့ခြင်း၊ ယင်းနှင့် ဆက်စပ်ကာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနယ်ပယ်တွင် တဖြေးဖြေးနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ် ယူမှု ကြောက်ခမန်းလိလိကြီးထွားလာခြင်း၊ တတိုင်းပြည်လုံး၌ လာဘ်ငွေများအပေါ် တံတားခင်းကာ တရားဝင် မရောက်ရှိ သင့်သူပေါင်း မြောက်များစွာ ရောက်လာခြင်း စသည်တို့ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ် နှင့် အာဏာရယူအုပ်ချုပ် ခဲ့သော စစ်ခေါင်းဆောင်များတွင် တာဝန် ရှိပါသည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပြသနာသည် န၀တ၊ နအဖ ခေတ်တွင်ထိပ်ဆုံး သို့ ရောက်ခဲ့ရာ ယခုလက်ရှိ အာဏာရယူထားသူဘ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများအနက် တာဝန်ရှိမှုအရပြောလျှင် န၀တ အတွင်း ရေးမှုး (၂) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ
တာဝန်ယူခဲ့သည့် လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာသည်လည်းကောင်း၊ တရုတ်လူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ သန်း တချို့ချီပြီးရောက်ရှိနေ ကြသည့် ပြဿနာသည် လည်းကောင်း၊ ဤ ၁၉၈၂ ခုနှစ်
နိုင်ငံသားဥပဒေ၊ တရားစီရင်ရေး၏ ကြပ်မတ်မှုမရှိတော့ဘဲ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ
ပိုင်များက ထင်သလိုချယ်လှယ်လုပ်ကိုင်နေမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူစနစ်၊
စစ်အာဏာပိုင်များ၏ နိုင်ငံရေးအရ အသုံးချ ကစားခံရမှု စသဖြင့် အကြောင်းပေါင်းများစွာ ပေါင်းဆုံကာ တည်ရှိလာခဲ့သော ပြသနာဖြစ်သည်။ အရင်းခံမှာ စစ်အာ ဏာရှင်စနစ်ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသည့် အခြေခံတွင် အာဏာကို အုပ်ချုပ်ရေးကိုင်တွယ် သူ စစ် အာဏာပိုင်များကသာ ရလိုခြင်း၊
ပွင့်လင်းသော လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ် မရှိခြင်း၊ တာဝန်ခံမှု မရှိခြင်း ကြီးကြပ်မှု မရှိခြင်း၊ ပြည်သူလူထုတွင် မေးမြန်းပိုင်ခွင့်နှင့် သတင်းအချက်ရယူပိုင်ခွင့်ကို ဥပဒေနှင့် အညီကျင့်သုံးခွင့် မရခြင်း၊ ဥပဒေပြဿနာ သာမက ဥပဒေစိုးမိုးရေးပြသနာပါတည်ရှိခြင်း အစရှိသည် တို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေအောက်တွင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ရယူခြင်းမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သူများ၊
ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးသမားများအတွက် လွန်စွာလွယ်ကူလှသော်လည်း သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံသား မဟုတ်သူသာမန်လူထုများ၊ ငွေကြေးချို့တဲ့သူများ
အတွက်အတော်ပင် အခက်အခဲ ကြီးမားခဲ့သည်။ ယင်းနှင့် ဆက်စပ်ကာ သဘာဝအလျှောက်နိုင်ငံသား စာရင်းဝင်သွားနိုင်သည့် လူမျိုးဖြစ်တည်မှုလှုပ်ရှား
မှုမှာ အထူးသဖြင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ တဖြေးဖြေးနှင့် အရှိန်ယူလာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကလည်း
လူမျိုးဖြစ်မှသာ နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည့် ဥပဒေကို ပြဌာန်းလာသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၅ ကို ကြည့်ပါ။
ပုဒ်မ ၃၄၅။ ။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အရည်အချင်းတရပ်ရပ်နှင့် ပြည့်စုံသူများသည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ် ကြသည်။
(က) မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားမိဘ နှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ
(ခ) ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြု ပြဌာန်းသည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးသူ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပါ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်အရ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပါရှိသော နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း ဟူသည့်
အနှစ်သာရသည် ပျက်သုဉ်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပါ တကယ်တန်း အတည်ပြုကျင့်သုံးသွားမည်ဆိုလျှင် တိုင်းရင်းသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ
မဟုတ်သူများသည် မည် သည့်အခါတွင်မျှ နိုင်ငံသား မဖြစ်နိုင်တော့။ နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း အခြေခံသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက
ချမှတ်ခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်သောမူဖြစ်သည်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများတွင်လည်း ဤ မူကို လက်ခံကျင့်သုံးလျှက်ရှိကြသည်။
ယခုဤမူကို ဖျက်လိုက်ပြီ။ သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ရန် လမ်းကြောင်း တကြောင်းသာ ရှိတော့သည်။ မိမိတို့သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်ပါသည်ဟူသည်ကို
လိုအပ်သည်ထက် ပိုမို၍ တင် သွင်းသော လှုပ်ရှားမှုများပေါ်လာမည်။ ထိုသူတို့အား မူလကပင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အာဃာတ ရှိထားသော လူမျိုးကလည်း
တန်ပြန်ဆန့်ကျင်သော လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်လာမည်။
သို့ဖြစ်၍လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများတောက်လျှောက် ဆက်ရှိနေမည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအောက်တွင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများ ပိုမိုကြီးထွားလာရန်သာ ရှိသည်။
နိုင်ငံတကာဥပဒေကို လိုက်နာဖေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တည်ဆောက်ခြင်း။
အရေးကြီးသော နောက်ထပ်ဥပဒေပြသနာတခုမှာ မိမိနိုင်ငံအနေဖြင့် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသော နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ကို
လိုက်နာရမည့်တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ “လူ့အခွင့်အရေးကတော့ လိုက်နာနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်” ဟူ၍ ပြောရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်တော့။
“လူ့အခွင့်အရေးကို တဘက်က စဉ်းစားပေါ့။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေလည်း ကြည့်ရမယ်” ဟူ၍ ဆင်ခြေပေးပြီး မိမိတိုင်းပြည်က လက်မှတ်ရေးထိုင်း အတည်ပြုထားသော
နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ကို မလိုက်နာ၍မရ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ သဘော တူစာချုပ်နှစ်ခုကိုသာ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုထားသည်။ တခုမှာ ကုလသမဂ္ဂ
ကလေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ် ဖြစ်သည်။ နောက်တခုမှာ အမျိုးသမီးများအား ခွဲခြားဆက်ဆန်မှုပပျောက်ရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ
သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ခုမျှသာ ရှိသော နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တို့ ကို လိုက်နာဘို့ မဆောင်ရွက်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအလယ်တွင် မည်ကဲ့သို
့မျက်နှာမော်မည်နည်း။ စစ်အစိုးရဖန်တည်း ထားသည့် လွှတ်တော်သည် ဤစာချုပ်များအား မည်ကဲ့သို့ လိုက်နာဖေါ်ဆောင်ဘို့ လိုအပ်ကြောင်း ဥပဒေကြောင်းအရ ဆွေးနွေးမှုများ
ယခုအထိ မကြားရသေးပါ။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တတွတ်တွတ် ရွတ်နေသူများသည် အဘယ်ကြောင့် မသိခြင်ယောင်ဆောင်နေပါသနည်း။ စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး
အခြေခံမရှိလျှင် တိုင်းပြည် မည်သည့်အခါတွင်မျှ တကယ်တန်း တည်ငြိမ်နိုင်မည် မဟုတ်သည်ကို အသိအမှတ်မပြုကြ၍လား။
ကလေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ကို လိုက်နာကြောင်း ပြသည့် အနေဖြင့် စစ်အစိုးရက ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကလေးသူငယ် ဥပဒေကို ပြဌာန်းပြီး ပုဒ်မ ၃ (က)
ပုဒ်မ ၃ (က) ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ကလေးသူငယ်၏ အခွင့်အရေးများကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရန် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများ အနက်တရပ်မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူ နှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံ တကာ သဘောတူစာချုပ် ပုဒ်မ ၂၄(၃) တွင် ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရယူခွင့် ရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြဌာန်းထားသည်။
ကလေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ် အပုဒ် (ရ) (၂) တွင် ကလေးသူငယ် များ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရစေရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်များက
၄င်းတို့၏ အမျိုးသားဥပဒေများနှင့် အညီ ဖေါ်ဆောင်ပေး ရမည်ဟု အတိအလင်း ပြဌာန်းထားသည်။ ဤသည်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြောင်း ပြသသည့်အနေမျိုးဖြင့်
စစ်အစိုးရ ၏ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကလေးသူငယ်ဥပဒေတွင် အောက်ပါအတိုင်းပြဌာန်းထားသည်။
ပုဒ်မ(၁၀) ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို တည်ဆဲ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ရရှိစေရမည်။
ကလေးသူငယ်ဥပဒေ အနေဖြင့် တဘက်မှ အခွင့်အရေး ပေးထားသလိုလို ပြဌာန်းထားသော်လည်း အခြားတဘက်မှ ပြန်ပိတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တည်ဆဲဥပဒေပြဌာန်းချက်အောက်တွင် အကြုံးဝင်မှသာရရှိမည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကလေးသူငယ်များသည် တည်ဆဲဖြစ်သော ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအောက်တွင် နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် မရကြပါ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်လာပြိးနောက် ပိုဆိုးသွားပါသည်။ သို့ ဖြစ်၍ ကုလသမဂ္ဂ ကလေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ပါ ကလေးအခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ခံစားစေရန် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ပြဌာန်းလာခဲ့သော ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ၊ ၁၉၉၃ ကလေးသူငယ်ဥပဒေ နှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ
ပြီးခဲ့သည့်ကာလ က ဖြစ်ရပ်များကို ဘာကြောင့် ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ဘို့ လိုအပ်သလဲ။
ဇူလိုင် လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အယ်လ်ဂျာဇီးရားက ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခန်းတွင် ကုလသမဂ္ဂမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးလည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ အမည်
မမှတ်မိတော့ပါ။ ၄င်းက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ မွတ်ဆလင် ဘာ သာဝင် ဦးရေ ရှစ်သိန်းခန့်ရှိကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ဘီဘီစီ ဆွေးနွေးခန်း၌ ၁၉၈၂ ခုနှစ်
မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်၏ ရှုတ်ထွေးမှုများကြောင့် မပြည့်စံနိုင်ဘဲ မည်သည့်အဆင့်အတန်းမှ မရရှိသူပေါင်း များစွာ ရှိနေ ကြောင်း မိမိက ထောက်ပြသောအခါ
ဦးဘရှိန်က မပြည့်စုံတဲ့လူတွေ မိမိတို့ဆီဘာကြောင့် ရောက်လာသလဲဟု ပြန် လည် မေးမြန်းပါသည်။ စာရေးသူလည်း မဖြေနိုင်ပါ။ ဦးဘရှိန်ဆိုလိုချက်အရ ထိုသူများသည်
မူလက ထဲက မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း အစဉ်တစိုက်အခြေချ နေထိုင်နေသူများ မဟုတ် နိုင်ငံပြင်ပမှ (အတိအကျအားဖြင့်) ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ၀င်လာကြသူများဟု
စင်စစ်အားဖြင့်မူ ဦးဘရှိန်သည် စစ်အစိုးရ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတဦးဖြစ်သဖြင့် လွှတ်တော်အတွင်းမေးမြန်း လျှင် ပို၍ အကျိုးရှိနိုင်ပါမည်။ ဖြေရန် တာဝန်အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မှာ သမ္မတ တာဝန်ယူထားသူ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန်သည် စိုင်းမောက်ခမ်းနှင့် မတူပါ။ လူသစ်မဟုတ်ပါ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်း ပြီးနောက် န၀တ နအဖ ခေတ် တလျှောက် လုံး ဗိုလ်ချုပ်တဦးအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွင် ပါဝင်လာခဲ့သူ ဖြစ် သဖြင့် ရှေ့မှီနောက်မှီဖြစ်သည်။
န၀တ နအဖ ခေတ်က သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများအပေါ် ဆက် လက် တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့အစိုးရသစ်တက်တာ အခုမှ တနှစ်ကျော်ပါသေးသည်ဟူ၍
အကြောင်းပြကာ မိမိ၏ တာဝန်ရှိမှုကို ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ခြင်းမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။
လူသစ်ကလေး လိုလို၊ ဘာမှ မသိသေးသလိုလို မျက်နှာ အနေအထားမျိုးဖြင့် လူထုကို မချည်းကပ်သင့်ပါ။ စစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော်လည်း တာဝန်သိသော၊ တာဝန်ယူရဲသော၊
လုပ်ရဲရင် ခံရဲသည့် သတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ကြောင်း ပြသင့်ပါသည်။
ဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းခေတ် အထိ ပြန်သွားပြီး တာဝန်ခံရန်တော့ မလိုပါ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ဝင်လာသူများ မည်သည့်နှစ်တွင် ဦးရေမည်မျှဝင်လာ သည်၊ မည်သည့်လမ်းကြောင်း မှ ၀င်လာသည်၊ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ၀င်လာသည်၊ ထိုသူများအနက် ယခုအချိန်၌် ဦးရေမည်မျှသည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်နေကြပြီ။ ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ တို့၏
ဦးရေမှာ မည်မျှရှိသည်။ မည်သည့် အဆင့်မှ မရသူဦးရေမှာ မည်မျှဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် ဤသို့ မရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ကလေးဦးရေ စုစုပေါင်း မည်မျှ ရှိပြီး ကလေးအခွင့်အရေးအရနိုင်ငံ သားခံစားခွင့်ရပြီးသူပေါင်း မည်မျှရှိပြီ အစရှိသဖြင့် တနိုင်ငံလုံးသိ ဖြေကြားရန် တာဝန်ရှိသည်။ သို့ မှသာလူထုတရပ်လုံး လိုက်ပါ စဉ်းစားနိုင်ပြီး ၀ိုင်းဝန်း အဖြေရှာနိုင်ကြပါမည်။
အနာဟောင်းများကို ဖေါ်ထုတ်ကုစားခြင်းမပြုဘဲ အပေါ်ယံ ဆီမန်းလောက်မျှဖြင့်
ကုသနေလျှင် မိမိတို့ နိုင်ငံသည် ကျမ္မာရေးကောင်းမွန်သည့် နိုင်ငံမည်သည့်အခါတွင်မျှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယဉ်ကျေးမှုတရပ်သဘွယ်ဖြစ်မသွားမီ အတိတ်ကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် လုပ်ဟန်အား ယခုကထဲက စတင် တိုက်ဖျက်ကြဘို့ လိုပါပြီ။
ရိုဟင်ဂျာပြသနာအား “စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ကျင့်သုံးလေ့ရှိသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဟန်” အခြေခံမှ ချည်းကပ်ခြင်း
ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သည့် စစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံလုံခြုံရေး (သို့ မဟုတ် ထိုမှ တဆင့်လျှော့၍) အမျိုးသားလုံခြုံရေး ဟူသည်ကို လူ ကြားကောင်းအောင် ကြွေးကြော်မည် ဖြစ်သော်လည်း စင်စစ်အားဖြင့်မူ စစ်အာဏာရှင်စနစ် လုံခြုံရေး အတွက် တချက်ခုတ်၊ အချက်ပေါင်းများစွာ ပြတ်အောင် လက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ၊ ရခိုင် အဓိကရုဏ်းအား အစီအစဉ်ရှိရှိ ဖေါ် ခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်နိုင်သည်။
(၁) စစ်အာဏာရှင်စနစ် စတင်ခဲ့သည့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများအား ၎င်းတို့ကပင်ဖန်တည်းပြီး လူထုထောက်ခံမှုရအောင် လုပ်ခဲ့သည့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်များစွာ ရှိခဲ့သည်။ ယခုဖြစ်ရပ်တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာများအား တတိယနိုင်ငံထွက်အောင် ကုလသမဂ္ဂက စီစဉ်ပေးနိုင်လျှင် အစိုးရက ကူညီပါမည်ဟု ဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ပြန် ကြေငြာလိုက်သည့် အချိန်တွင် ငါတို့ချစ်တဲ့ သမ္မတကြီး
ဟူသော အသံများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
(၂) ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် တည်ဆောက်မည်ဆိုလျှင် စစ်တပ် ကြီးကြီးထားရန် အကြောင်းလုံးဝ မရှိ တော့ပါ။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှုများ၊ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ၏ လှုပ်ရှားမှုများအားကောင်း လာလေလေ စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍ သိသာစွာ လျော့နည်းသွားလေဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကို စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း၊ သစ်များက
မလိုလားပါ။ စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍ ကြီးကြီးမားမား ရှိနေသေးကြောင်း ပြလိုသည်။
(၃) အရေးအကြောင်းဖြစ်လာလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် လည်းကောင်း လူထုအနေဖြင့် မည်သို့မျှ အားကိုး၍မရ။
တပ်မတော်ကိုသာ အားကိုးရသည်ဟု လူထုကို အယုံသွင်း လိုသည်။
(၄) ပြီးခဲ့သည့် လတချို့ က ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ နဲ့ရခိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ခေါင်းဆောင်များ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သွားရောက်သောအခါ ရခိုင်လူထု ထောင်ပေါင်းများစွာက သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည် ဟု သိရသည်။ ဤသို့သော အခြေအနေမျိုးကို စစ်အာဏာရှင်များကလုံးဝ ကြိုက်နှစ်သက်လေ့မရှိပါ။ ရခိုင်လူထုကို ပညာပေးဘို့ လိုပြီဟု သုံးသပ်ပုံရသည်။
ယခုမူ ရခိုင် လူထု ၏ ခြေထောက်ကို ရိုက်ချိုးလိုက်နိုင်ပြီ ဟု ဆိုနိုင်သည်။ စစ်တပ်ကို အားကိုးနေရသည့် ဘ၀သို့ သက်ဆင်းသွားပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ ရခိုင် အဓိကကရုဏ်းအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ လူထုအားလုံး ငြိမ်းချမ်း၊ လုံခြုံ၊ အင်အား ပြည့်စုံစွာ ရပ်တည်နိုင်ခြင်း မရှိလျှင် ပြည်ထောင်စု အတွင်းရှိ အခြားတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထု အားလုံးပါ အင်အားချည့်နဲ့ နေပါမည်။ နောက်ထပ် တရုပ် ဗမာအေ၇းအခင်း ပါ ဖန်တည်းခြင်းခံရပါက စစ်တပ် က ကိုင်မြှောက်ထားသော သေနတ်အောက်၌ အရိပ်အာဝါသ ခိုပြီး အသက်ရှင်ရသည့် ဘ၀သို့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုကြီး တရပ်လုံး ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ ရခိုင် အဓိကကရုဏ်းအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသည့်အနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရန် အကြံပြုပါသည်။
(က) ယခုအချိန်၌ ရိုဟင်ဂျာများသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့် (တနည်းအားဖြင့်) လူအဖြစ်အသက်ရှင်ခွင့် ရနိုင်သည့် အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာများပင် မရရှိဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပါသည်။ ဤသည်မှာ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါ။ လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှ ကြည့်လျှင် မဖြစ်သင့်သလို မေတ္တာတရားကြီးမားသည်ဟု ဂုဏ်ယူကြလေ့ရှိသော ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်များ အနေဖြင့် အမြန်ဆုံး ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် စဉ်းစားဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
(ခ) ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုများကို အားပေးရာရောက်ပါသည်။ တရားမျှတမှုကိုလည်း မျက်ကွယ်ပြု ရာရောက်သည်။ မိမိတို့အမြင်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ထုတ်ဖေါ်သင့်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအားဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သမျှ အမှန်တရားများ ပေါ်ထွက်လာစေ၇န် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းသင့်ပါသည်။
(ဂ) ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သည့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က ၀င်ရောက်ကျူးလွန်မှုကို နိုင်ငံတကာက ရက်စွဲအတိအကျဖြင့် ထောက်ပြလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကြီး တစုံလုံးကို အစမှ အဆုံး သေချာစွာဖေါ်ထုတ်ပြီး နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင် ဆောင်ရွက်နေသူများ အပါအ၀င် ဦးဆောင်ကျူးလွန်ကြသည့် တရားခံအားလုံးကို လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်၊ မရွေးဘဲ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံဖြင့် ထိရောက်စွာ ဖေါ်ထုတ်အရေးယူ နိုင်မှသာ နောင်သည်လို အဖြစ်ဆိုးမျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါမည်။
(ဃ) ပြီးခဲ့သည့် နအဖ စစ်အစိုးရအောက်၌ ကျူးလွန်ဖြစ်ပွားခဲ့သော နိုင်ငံတကာ အဆင့်ရှိသည့် ပြစ်မှုကြီးများကို ကုလသမဂ္ဂက ဦးဆောင်ပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးစေရန် လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အရှိန်ကောင်းစွာရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တော့မည့် အနေအထားရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများ လုပ်ပေးသယောင်နှင့် လမ်းကြောင်းလွှဲနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယင်းလှုပ်ရှားမှုမှာ ယာယီ တိမ်မြုပ်သွားခဲ့သည်။
ယခုရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ပြစ်မှုကြီးများထပ်မံကျူးလွန်နေပြန်ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာ လူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်း ၅၈ ဖွဲ့က စုပေါင်း၍ ဤမှုခင်းကြီးအပေါ် နိုင်ငံတကာ
အနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုလာပါပြီ။ ဤ လှုပ်ရှားမှုကို လူထုတ၇ပ်လုံး ထောက်ခံသင့်၊ ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုသင့်သည်ဟု မြင်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖေါ်ထုတ်ခွင့်မရပါက နောင် အလားတူပြစ်မှုကြီးများ ထပ်မံကြုံတွေ့ ဦးမည်မှာ မလွဲပါ။
(င) ရွာတရွာတွင် သူကြီးကိုယ်တိုင်က ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသော အမှု၌ သူကြီးသားကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထားပြီး အမှုဖေါ်ထုတ်ခိုင်း၍ မရပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တရားစီရင်ရေး ယန္တရား တခုလုံးမှာ လွတ်လပ်မှုလုံးဝ မရှိဘဲ စစ်ခေါင်းဆောင်များအား ဆန့်ကျင်ရပ်တည်ရဲသည့် အနေအထားမရှိပါ။ လူ့ အခွင့်အရေးကော်မီတီဆိုသည် မှာလည်း သမ္မတရုံးအဖွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်း တခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေပြီး သူကြီးတူ အဆင့်လောက်သာ ရှိပါသည်။ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဓိကရုဏ်းကြီး၌ ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်က မိမိတို့ အစိုးရ နှင့် စစ်တပ်၏ လက်ချက် မည်သို့ မျှ ပါဝင် ပတ် သက်ခြင်း မရှိကြောင်း သက်သေပြရဲသည် ဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်
တရပ်စေလွှတ်ပေး ရေး အတွက် ကုလသမဂ္ဂသို့ အမြန်ဆုံး ပန်ကြားရန် တောင်းဆိုသည်။
(စ) ရခိုင်လူထုအား မေတ္တာနှင့် ယှဉ်လျှက် လူ့ အခွင့်အရေးကို မြတ်နိုးမှု၊ အသိနှင့်ယှဉ်သော မျိုးချစ်စိတ်၊ တာဝန်ယူမှု ရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်လိုသည့်ဆန္ဒ၊ အမှန်တရားကို ဖေါ်ထုတ်လိုသည့် သတ္တိများ ရှိလာအောင် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီသင့်ပါသည်။
(ဆ) ရိုဟင်ဂျာများအပါအ၀င် ရှစ်သိန်းခန့် မျှသော မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များ ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဦးဘရှိန် ပြောသကဲ့သို့ မ၀င်သင့်ဘဲ ၀င်လာသူများရှိနေလျှင် နောင်ကိုဆက်ပြီး မ၀င်လာနိုင်အောင် တားဆီးကာကွယ် သည့် နည်းလမ်းကို အမြန်ဆုံး ရှာရမည်မှာ မုချဖြစ်ပါသည်။ ရောက်သင့်၊ ရှိသင့်သော လူဦးရေထက် အဆများစွာပိုကာ စစ် အာဏာရှင်စနစ်နှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်သစ် ဟောင်းများ၏ တာဝန်ရှိမှု အောက်တွင် ရောက်ရှိနေကြပြီ ဖြစ်သူများကိုမူ ရ၀မ်ဒါတွင် ဟူတူများက တူစီများအပေါ်ကျင့်သုံးသည့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုပုံစံမျိုးဖြင့် ရှင်းပစ်၍ မရနိုင်ပါ။ လူသား ချင်းစာနာသည့်စိတ်ဓါတ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး လူမျိုး ဘာသာ စကား ဓလေ့ထုံးတမ်း ယဉ်ကျေးမှု မတူကြသူ များ အတူငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်သည့် လူ့ အဖွဲ့အစည်း တရပ်အဖြစ် တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားရန်သာ ရှိပါသည်။
(ဇ) နောင် သည်လိုအဖြစ်ဆိုးမျိုး ကို မုချရှောင်လွှဲနိုင်ရန်မှာမူ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကို အမြစ်မှနေ၍ ချေမှုန်းဘို့ လိုပါ သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်အတွက် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုကြီးတရပ်လုံး လက်တွဲကြဘို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ သို့မှသာ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား တစုံလုံး ကို
ပြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာသာသည့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်လာနိုင်ပါမည်။
ဤစာတမ်းတိုအား အချိန်တိုအတွင်း အမြန်ဆုံးရေးသားရသဖြင့် မပြည့်စုံနိုင်မည်မှာ သေချာပါသည်။ စာရေးသူ အနေ ဖြင့် စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် တရားမျှတမှုအခြေခံတွင် မိမိတို့ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ငြိမ်၊ တောင့်တင်း၊ ကြီးထွား၊ စည်ပင် သည်ကို မြင်လိုသော စေတနာဖြင့်သာ
ရေးသားပြုစုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိထက်ပို၍ အဆများစွာ တတ်ကျွမ်းနားလည်သော ပညာရှင်ကြီးများ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ များ၊ လူထုများ မြောက်များစွာ ရှိပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာ ရခိုင် အဓိကကရုဏ်းအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် နည်းလမ်းမှန်သမျှ ဆက်လက်တင်ပြပေးသွား ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
(ရှေ့နေ ဦးအောင်ထူး၏ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကိစ္စ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လုံခြုံရေး အပေါ် အမြင်ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူ၏ အမြင်သာဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ )
Tags: ကချင်, ရခိုင်, ရိုဟင်ဂျာ
မြန်မာပြည်တွင်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား ဦးသိန်းစိန်၊ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ပြောင်းလဲနိုင်မလား (2)
အောင်ခိုင်မြင့် – ၂၀၁၇ ဒိုင်ယာရီ အတွေးအမြင် စစ်တမ်း (0)
14 Responses to ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ၊ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ
Nay Htet on July 30, 2012 at 6:30 pm
Haha.Aung Htoo.You know what you doing,right?Shame on you.Wanna meet u soon …mann
ichikawa on July 30, 2012 at 10:30 pm
r u rohenja????????????
Myant Linn on July 30, 2012 at 11:51 pm
ွှွှအထက်ပါ စာတမ်း (သို့) ဆောင်းပါး သည် ရခိုင်လူထုရဲ့ ကိုယ်ဇာတိမြေတွင် မလုံခြုံမှု၊ စိုးရိမ်မှုများကို လုံးဝ လျော့ကျအောင် လုပ်နိုင်မယ် မဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်လာမှ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်သည်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ဘိုးဘွားပိုင်နယ်မြေထဲတွင် ဘာသာမတူ၊ ယဉ်ကျေးမှု မတူသူများ မတရား ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသောအခါတွင်လည်း လုံခြုံရေးကို စိုးရိမ်ရပါသည်။ ယင်းပိုင် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက် ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ဆိုးမွေများကို ရခိုင်ပြည်သူလူထု တစ်ခုတည်းသာ ခါးစည်းခံနေရပါသည်။ အဲဒီ ဘင်္ဂါင်္လမူဆလင်မျးကို ဗမာပြည်ဘက်ကိုလည်း သွားခွင့်မရှိပါ။ လူကြီးမင်းပြောသလို အဲဒီ ဘင်္ဂလီလူမျိုးများဟာ ထမင်းထုပ်ပေးပြီး ပြန်ပို့တာ ခံနေရတယ်ဆိုရင် ပြန်ပို့တဲ့ ဘာသာစကားတူ၊ ယဉ်ကျေးမှုတူ၊ ဘာသာတူတဲ့ ဘင်္ဂလာဒေရ်ှမှာကော တာဝန်မရှိဘူးလား။ အဲဒီဘင်္ဂလီမူဆလင်တွေက တမင်သက်သက် ကမ္ဘာက သနားလာအောင် ဖန်တီးပြီးကာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကို လူမျိုးရေးအရ လွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ အဲဒီ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေက အဲဒီသနားစရာကောင်းတဲ့ လူတွေကို လူသားချင်းဆာနာပြီး လက်ခံပေးဖို့ စဉ်းစားမပေးနိုင်ဘူးလား။ အဲဒီ အယ်ဂျာဇီးရား ရုပ်သံဆိုသည်မှာလည်း မူဆလင်တိုင်းပြည်တွင် အခြေစိုက်ထားသော အသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး၊ အဓိကရုဏ်းနောက်ပိုင်း ရခိုင်လူထုရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုစိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေသလဲဆိုတာ တခါတလေမှ လွှင့်ထုတ်ဖူးတာ ရှိပါသလလား။ ရခိုင်လူထုကို ပညာပြချင်တာကြောင့် အဲဒီအဓိကရုဏ်းကို လက်ရှိအစိုးရက ဖန်တီးတယ် ထားပါတော့ ဘာကြောင့် ဘင်္ဂလာဒေရှ့် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက အဲဒီအဓိကရုဏ်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ နိုင်ငံတကာ မူဆလင် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တွေ့ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာလဲ။
မျိုးသူရခိုင် on July 30, 2012 at 11:53 pm
အင်တာနက်မှာ စာလေးတလုံးရေးနိုင်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူသုံးသပ်ကြမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးက အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
cp on July 31, 2012 at 3:40 am
If you really love Rohimjar, take them to your home stay together with them!!!!!!
Skyline View on July 31, 2012 at 5:16 am
I want to sayabit more. But I will point outafew here.
The author is, no doubt, very educated and excellent in law. I admired him.
Will you – , say , your poor destitute relatives, who sought your support – Will you support by giving away substantial amount of money and food and ( possibly may be accommodation forafew weeks or months ) …? I will say so.
You will be very reluctant to keep them in your house with live-together condition under the same roof. That is your own bloodline. And you are Buddhist.
Please do not use the Buddhism in wrong way.
To keep all of them for long duration is beyond the joke.
Yes. The Government ( especially Ne Win and so on ) and Immigration Department made terrible mistakes in the past and corrupted. That is the price Myanmar is paying for now. But Myanmar should not make ‘ THE SAME MISTAKE IT MADE BEFORE ‘ .
Regarding Our D A S S K .
I will say D A S S K reputation, power, capability will not be affected just because of ‘ non-intervening in this affair ‘ by her. As everyone knows, she is not in the status of doing so. Being famous in the world and liked by us, does not mean she should. She will do it when she can.
You stated, the security issue is not danger , at this stage, by so called such people. I will say SaYa Aung Htoo, it is very hard to say. You should not drawaconclusion like that offhand.
U Ba Shein
He might exemplified U S A in relation to ‘ attention of national security’ . He example is not good as well as your explanation . What he might intend to say is ‘ general view’ stating even U S is taking security matters seriously. You stated U S did not do anything ‘racial discrimination ‘ in its country.
I will say that example given by U Ba Shein – can be ignored. That is not that much important in discussing this issue. ( By the way I do not know who he is )
B S P P / etc
They all are bastards. Everyone knows it. They did not resolve the problem earlier. And the problem grew and grew and grew.
Yes , they are Bengali. Based on the history, there are ‘ come in and go-out ‘ ( asafrequent flyers) to-and-fro from neighboring country to Myanmar ( Burma ) for ages since colonial time. As years go by, human instinct – ‘ this is our land ‘ . There must be genuine and dedicated people who lived in Myanmar ( some Bengali Burmese are still prevalent in Australia and U S and elsewhere, migrated from Myanmar by Myanmar Passports – these days ). But years by years, there are more and more.
Why? Mainly Two Reasons. May be more.
1. The one you said, Buddhism, Myanmar Nature – donation, giving favor, give away, in accordance with BUDDHISM. And more and more people came in . Immigration corrupted. Government’s poor management.
2. Myanmar is vulnerable. Myanmar land is arable. Very good for cultivating. Food and Space issue. No room in neighbor areas and there are more and more population. Human is reproduction. Not things. Not trees. Myanmar can not cope with that. Sustainability is the issue. That is the question.
Years and years, this is 2012 – 21st century. All changes. Not as 1948 ( SayYoe MeeHlone, C Ko Yay Choe ). Those were the days. Not in these days.
Myanmar itself is coping to feed its own people. There are many people who cannot use
4. clean clothes for summer and winter
Mr. Aung Htoo
May I present one more example, if you yourself cannot cope, will you be able to / willing to ‘ give away’ and or ‘ accommodate’ others. Forget about ‘ piousness’ . Think practically.
Even so, even if you are coping well, it is at your discretion to ‘ give away ‘ or ‘ NOT. It is at your discretion. SOLELY at your discretion. Because this is you. No others.
This is the delicate issue. Even when we all die, this can becomeaongoing issue. Again it can beaforerunner of ‘ ……… ‘ .
After all, at the end of the day, no matter what bloody B S PP , Na Wat Tha, etc. the fate of Rakhine , and thence to the whole country is up to Myanmar.
Peace is good. We all like to solve this peacefully. Do not let someone instigated for their personal ‘ fame and fortune ‘ .
Having said so as above. I am not totally beyond the way of our respective author. I do still admire him. Myanmar needs people like SaYa U Aung Htoo.
This is not D A S S K’ s task at this stage. One knows what to do when the time’s up.
This is not Buddhism’ s donation/ sympathy/ empathy issues.
This is legal issue. This is corruption issues. This is ignorance issue. This is work, food, room, issues.
There must be an another issue.
Root* on July 31, 2012 at 6:59 am
Both sides have their bads and goods…both only reveal their good sides………..
Most muslins have no citizen spirit , just only religious spirit….(religious blindness)
Most military have no patrotism , just only have egoism….
Population colony is muslin aim –..in the era of ballot democracy-… population will decide power…..
Military will continuously show twist and turn to deceive Buemese people and world …..until they may be assassinated or bombed by Nato or US…….otherwise –more hundreads years ahead——no civilized ethics in ther heads —-this means no proper education—-but their offsprings are almost at democratic rich countries ……..
Amnesty looks their aspect ……Rakhine looks Rakhine’s aspect……….
Root of the problem is Roof of the country since Ne Win till Thein Sein…not yet finish……..
NLD has obligatory to peaceful way …..
For pushul way , if can not do Libya or Syria styles , can consider for Israel’s style…….to eradicate this root………..
Rakhine and Burmese are likeasandwrich between military egos and global religious colony force……
Sorrifully , Burma is still in moriband state as before…………..
Set Htun on July 31, 2012 at 11:17 am
Lawyer Ko Aung Htoo,
We are earnest to see clarification on your statement of northern AB massacre by 1st March, 1992. Myanmar government officials probably asses you, Dr. Naing Aung, R. Aung Naing are responsible.
Ko Moe Thee got green light to go back home.
၃- ကိုအောင်ထူး ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများအဖွဲ့ (Burma Lawyer Council) ကလဲ ၁၉၉၂ မတ်လ ၁ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်နဲ့ ကိုနိုင်အောင် တို့ ကြေညချက်ကို မှန်ကန်ကြောင်း၊ သူတို့လုပ်ရပ်ဟာ တရားဝင်မှုရှိ ကြောင်း ထောက်ခံဖေါ်ပြထားတယ်။ ဒီကြေညာချက်နှစ်စောင်ဟာ မြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိက တာဝန်ရှိသူ တွေအဖြစ် အခိုင်အမာသက်သေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအောင်ထူးဟာ ထိုစဉ်က ကိုနိုင်အောင် အဖွဲ့မှာ ဗဟိုအလုပ်မှု ဆောင် ကော်မတီဝင်တဦးလည်းဖြစ်၊ ရှေ့နေအဖွဲ့မှာလည်း ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်ပါတယ်။ မတရားမှုတွေကို ဥပဒေအရ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမယ့် ရှေ့နေအဖွဲ့ဟာ ဘာကြောင့် မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု ကျူးလွန်သူတွေဖက်က ကာကွယ်ပေးခဲ့ တာက အလွန်ရုပ်ဆိုးတဲ့ဖြစ်ရပ် ဖြစ်တယ်။
၄- ၁၉ ၉ ၂ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူလျှိုမှုနှင့် သတ်ဖြတ်မှုများကို ကျနော်တို့ ဆန် ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတိအလင်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကြေညာချက်မူရင်း ကို အောက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
၅- မြောက်ပိုင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘီဘီစီက အင်တာဗျူးတခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ (အသံဖိုင်တွေ ဘီဘီစီမှာ ရှိနိုင်ပါသေး တယ်) ကိုနိုင်အောင်နှင့် ကိုအောင်ထူး က တဖက်၊ ကိုအောင်နိုင်ဦး (ABSDF – Moe) က တဖက် အခြေအတင်ဆွေးနွေး ခန်းမှာ ကိုနိုင်အောင်နှင့် ကိုအောင်ထူး က မြောက်ပိုင်းကိစ္စကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ကိုအောင်နိုင်ဦး ကတော့ သတ်ဖြတ်မှုကို ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
Set Htun on July 31, 2012 at 11:19 am
We are earnest to see clarification on your statement of northern AB massacre by 1st March, 1992. Myanmar government officials probably asses you, Dr. Naing Aung, R. Aung Naing are responsible. Ko Moe Thee got green light to go back home.
မမ on July 31, 2012 at 1:48 pm
Pho Par Kyi on August 2, 2012 at 4:47 pm
အယ်လ်ဂျာဇီးရား နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလွှင့်ဌာန can shoot their TV news as they want & why Mr. Aung Htoo is writing about it in moemaka & why moemaka also on line his writing. Why Mr. Aung Htoo is not writing about Myanmar’s many people who are exploiting by Thai authorities or Thai people and Myanmar women who are being raped by Thai police or army or officers or Thai people. Can Myanmar citizens who are working in Thailand since decades, can they ask Thai authority to acknowledge them as Thai citizen. By the way, Mr. Aung Htoo, Are youaရိုဟင်ဂျြာ?
me on July 31, 2012 at 1:58 pm
hell mohomed nour, u warry about rohimjar u call tham to stay u country better,what happen nobal prize
melay on August 1, 2012 at 8:05 am
there is no way we can agree that they (rohingya) are our citzens. if you love them too much take their $ and kiss their ass. you also have no rights to become our citzens.
saw on August 11, 2012 at 10:54 am
ငြိမ်းချမ်းအေး ● ဖော်ထုတ်ရမယ့် ‘ပုံစံမျိုးစုံ’ ရှိ လိင်အကြမ်းဖက်မှုများ
လူထု ခေါင်းဆောင် မှ လက်ပံတောင်း “ပေါင်ချိန်” သို့ (Tu Maung Nyo)
Tu Maung Nyo - လွှတ်တော်ထဲမှာ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နဲ့ ဦးမြင့်ဆွေ ဘယ်သူက ပေါ်ပြူလာ ပိုဖြစ်သလဲ
စိုးနေလင်း - မြန်မာနိင်ငံက ရင်လေးစရာ အနာဂတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ
ဇင်လင်း - ကျောက်ဖြူ-ကူမင်း ရထားလမ်းစီမံကိန်း သာတူညီမျှ ဖြစ်ရဲ့လား?
ငြိမ်းချမ်းအေး - အနာဂတ်အတွက်ဆိုးမွေများ
မောင်ရစ် - အစွန်းရောက်၊ ရှေးရိုးစွဲ၊ အကြမ်းဖက်နဲ့ အမြတ်ထုတ်သူများ
ကျော်ဟုန်း – ဘီလူးစည်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း https://t.co/1pKvxDMJFA https://t.co/Lv6kU1Hn4F about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို အထွက် တိုးစေမည့် စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် https://t.co/fOwvlPT0Fe https://t.co/egJocOUq9l about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
တည်ဘွားဦး – အသည်းကွဲစက်ရုပ် https://t.co/QjiPGoiuHY https://t.co/IZiev0V593 about2hours ago ReplyRetweetFavorite
ဒါရိုက်တာပန်းချီဆရာ ၀င်းဖေနဲ့ ခေတ်ပေါ်ပန်းချီဆရာ ၄ဦးရဲ့ တဒင်္ဂ အမည်ရတဲ့ပန်းချီပြပွဲ https://t.co/xXmxqXwYqR https://t.co/6MBegX80FB about5hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တစစ် စစ်နဲ့ https://t.co/HAqivf5HCO https://t.co/0DN2QoGLrT about 11 hours ago ReplyRetweetFavorite